साप्ताहिक राशिफल : तपाईका लागि यो हप्ता शुभ-अशुभ कस्तो रहला ?
बैशाख १५, २०७६ BN
आर्थिक सम्बृद्धि, उन्नति, प्रगतिको साता रहला। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक सुख, शान्ति, सम्बृद्धिको साता रहने छ। दाजुभाई परिवार बिचको सम्बन्ध र सहकार्य राम्रो देखिन्छ। आर्थिक उपार्जनका मार्गहरु प्रसस्त रहन सक्नेछन। शिक्षा बढ्नेछ। खेलाडीको लागि साता मध्यम छ।
स्वास्थ्यमा साताभर केही समस्या देखिनेछ। नयाँ सवारीसाधन र घरजग्गा जमिनको योग बन्ला। शुभ कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ। नचाहिँदा झुटा आरोप र प्रत्यारोप सहनु पर्ने अवस्था रहेको छ। पारिवारिक सुख, शान्ति, सम्बृद्धि छाउनेछ। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठाहरु बुधबार, विहिबार, शुक्रबार प्राप्त हुनेछ। नयाँ कार्यको थालनी रहला।
आयका मार्ग प्रसस्त बढ्न सक्नेछ। मनमा केही चिन्ता र अप्ठ्यारा पक्षहरु रहला। जागिरेहरुको लागि यो साता त्यति राम्रो देखिएको छैन। पारिवारिक सुख, शान्ति, सम्बृद्धि र उन्नती प्रगतिहरु रहन सक्ने छ। नयाँ कार्यको थालनी रहला। राष्ट्रबाट पुरस्कृत हुने सम्भावना रहेको छ। सुख, शान्ति, सम्बृद्धि प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा भने लाभको साता रहेको छ। मनमा उत्साह र उमङ्गहरु छाउन सक्ने छ। अध्यात्मिक क्षेत्रले गर्दा मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्नेछ।
आय आर्जनका मार्ग प्रसस्त रुपमा बढ्नेछ। मनमा उत्साह र उमङ्गहरु बढ्नेछन्। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ। पारिवारिक सुख, शान्ति, सम्बृद्धि मिल्ला। दाजुभाई, दिदीबहिनी, कुल, कुटुम्ब, इष्टमित्र बिचको प्रेम र सदभाबहरु बढ्नेछन्। स्वास्थ्यमा केही समस्या रहला। छात्र छात्रालाई राम्रो देखिन्छ। आध्यात्मिक र धर्म कर्ममा भने दिन बित्ने छ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्र भने मध्यम देखिन्छ।
जागिरेहरुका लागि यो साता राम्रो छ। मनमा उत्साह र उमङ्गहरु छाउन सक्ने छन्। पारिवारिक सुख, शान्ति, सम्बृद्धि, उन्नति, प्रगति रहला। कुल, कुटुम्बहरुबाट पाउने सहयोग भने प्रसस्त रुपमा प्राप्त हुने देखिन्छ। कतै हजुरले नयाँ गर्न खोज्नु भएको काममा केही बाधा र समस्याहरु नहोला भन्न सकिन्न। लेनदेन र कारोबारमा भने थोरै विचार पुराउनु पर्ने अवस्थाहरु रहेको छ। घरपरिवार बिचको सम्बन्ध, सहकार्य भने राम्रो देखिन्छ।
जागिरेहरुका लागि यो साता मध्यम छ। दाजुभाइ, कुलकुटुम्ब, इष्टमित्रहरुबाट पाउने सहयोग भने राम्रो पक्षमा रहेको छ। व्यापार, व्यवसायमा लाभको साता बन्ला। मनमा उत्साह र उमङ्गहरु बढ्ने छन्। दाजुभाई दिदीबहिनी बीचको सम्बन्धमा केही समस्याहरु रहला। यात्रा सुखद बन्न सक्नेछ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुनुहुनेछ। खेलाडीहरुका लागि साता मध्यम रहेको छ।
मनमा केही अप्ठ्यारा पक्षहरु साता भरि छाईरहन सक्ने छन्। व्यापार व्यवसायमा लाभ रहेको छ। पारिवारिक सुख, शान्ति, सम्बृद्धि बन्ला। लेनदेन र आर्थिक पक्षमा केही तनाब रहन सक्ने छ। नयाँ घरजग्गा जमिनका योगहरु बन्ने छन्। दाम्पत्य जीवनमा खुसि, उत्साह र उमङ्गहरु प्राप्त हुने अवस्था हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसायमा लाभ छ। राजीनितिक र सामाजिक क्षेत् मध्यम छ। कतै नयाँ कार्यका थालनीहरु बन्न सक्नेछन्। सवारी साधनमा निकै विचार पुराउनु पर्नेछ।
मनमा केही तरङ्गहरु रहलान। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बढ्नेछ। आर्थिक उपार्जनका मार्गहरु प्रसस्त रुपमा बढ्ने छन्। नचाहिँदा झुटा आरोप प्रत्यारोप सहनु पर्ला। खानपानमा भने मुख बार्नु पर्ने छ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने साता रहेको छ। दाजुभाई दिदीबहिनी बिचको सम्बन्ध राम्रो रहला। व्यपारमा लाभ रहेको छ। साहित्य, संगीतमा भने निकै राम्रो देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही विचार पुराउनु पर्ला।
नयाँ कामको थालनी हुन सक्ने छ। मनमा उत्साह उमङ्गहरु बढ्ने छ। धार्मिक कार्यमा सरिक हुनेछ। स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधारको स्थिति देखा पर्ला। विद्या बुद्धि बढ्न जानेछ। नयाँ सवारी साधनका योग बन्नेछन्। देश विदेशबाट खुसीको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ। कृषि क्षेत्रमा लाभ छ। व्यापार व्यवसाय मध्यम छ। राजनीतिमा त्यति राम्रो छैन।
व्यापार व्यवसाय राम्रो देखिएको छ। राजीनितिक, सामाजिक क्षेत्र मध्यम छ। साहित्य संगीतमा भने निकै राम्रो चासो पर्ला। आर्थिक सम्बृद्धिको साता बन्ला। धार्मिक कार्यमा सरिक हुने देखिन्छ। सन्तान सुख, शान्ति, सम्बृद्धि प्राप्त होला। पारिवारिक सुख शान्ति सम्बृद्धि मिल्ने छ। कतै नयाँ कार्यको थालनी यो साता बन्ने देखिन्छ। मातापिता घर परिवारबाट पाउने सहयोग पूर्ण रुपमा प्राप्त हुने देखिएको छ।
साता निकै राम्रो छ। रोकिएको काम बन्लान। आर्थिक पक्ष सबल भएर जाला। व्यापार व्यवसायमा राम्रो पक्ष देखिएको छ। मनमा उत्साह र उमङ्गहरु छाउनेछ। नयाँ कार्यको थालनी बन्ने छ। पारिवारिक सुख शान्ति सम्बृद्धि बन्ने छ। घर परिवारको सहयोग प्राप्त रहने छ। घर परिवार बीचको सम्बन्ध सहकार्यमा निकै राम्रो देखिएको छ। लेनदेनमा भने थोरै विचार पुर्याउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। बिद्या, बुद्धि बढ्ला।
काम र उन्नति प्रगतिको पक्ष राम्रो देखिन्छ। घर परिवारको सहयोग प्राप्त रहला। स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार रहन सक्नेछ। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा भने मान सम्मान बढ्नेछ। आर्थिक उपार्जनका मार्ग प्रसस्त बन्लान। कृषि क्षेत्रमा लाभ देखिएको छ। देश विदेशबाट खुसीको खबर सुन्न पाउनु हुनेछ। दाजुभाई दिदीबहिनी बिचको सम्बन्ध राम्रो बन्नेछन्। नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ।
– डा. उत्तम उपाध्याय न्यौपाने
प्रकाशित : आइतबार, बैशाख १५, २०७६०२:५६
भोलि बैशाख १६ गते तपाईको दिन कस्तो रहला , हेर्नुहोस भोलिको राशिफल !